प्रविधि/समाचार/२०१८/२५ - Meta
This page isatranslated version of the page Tech/News/2018/25 and the translation is 89% complete.
प्रविधि समाचारले सम्पूर्ण सफ्टवेयर परिवर्तनहरू जसले तपाईँ र तपाईँजस्ता सहकर्मी विकिमिडियनहरूलाई प्रभावहरूमाथि नजर राख्न सघान सारांश हरेक हप्ता पस्किन्छौँ। सदस्यता लिनुहोस्, योगदान दिनुहोस् र सुझाव दिनुहोस्।
सिन्ट्याक्स हाइलाइटिङ देब्रेबाट दाहिने लेखिने विकिमिडिया विकीहरूमा परीक्षणमा रहेको छ । यो अहिले सामान्य फिचर हो । यो CodeMirror मा आधारित छ । 
यस हप्ताको अन्तमा हुने परिवर्तनहरू
अब अर्को बैठक सम्पादन समूहसँग गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँले बैठकमा विकासकर्ताहरूलाई कुन बगहरू बढी महत्वपूर्ण छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। बैठक १९ जुन at 18:30 (UTC) मा हुने छ। कसरी सहभागी हुने हेर्नुहोस् ।
IRC मा तपाईँले प्राविधिक सल्लाह बैठकमा सहभागी हुनसक्नुहुन्छ । बैठकमा स्वयंसेवी विकासकर्ताहरूले सल्लाह माग्न सक्नेछन् । बैठक २० जुन at 15:00 (UTC) मा हुनेछ । कसरी सहभागीहुने हेर्नुहोस् ।
आगामी परिवर्तनहरू \_
All wikis that have not already done so will switch to use the Remex parsing library on5July. यसले Tidy लाई प्रतिस्थापन गर्ने छ। तपाईँले can help बाँकी समस्याहरू समाधना गर्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । 
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Tech/News/2018/25/ne&oldid=18180732"
This page was last edited on4July 2018, at 18:14.